imali onokuthenga ngayo ngetyala
Mboleko elide kwiinyanga
Faka imali nexesha le-mboleko, inzala kunye nohlobo lwentlawulo.
Ikhaltyhuleyitha uzakubala isixa lweentlawulo, ityala kunye ixabiso letyala.
abantu ngenxa iintengo ezinkulu uboleka iinkonzo. Iibhanki kunye nemibutho engekho-yebhanki zinika ukufumana imali-mboleko ngenxa ezahlukeneyo kweemeko. Xa uthatha imali-mboleko enkulu, umzekelo, ukuthenga indlu, imoto, imali-mboleko ukuba ukwakha indlu, okanye uphuhliso ishishini labo, kubalulekile ukwazi ukuba le mboleko uza kuba nako ukuyenza. Ukuze baqinisekise ukuba ukukhetha inkqubo ngetyala, sikunika ukusebenzisa isixhobo sokubala yethu mboleko. Ngena kwi kwiinkalo ezifanelekileyo imali-mboleko, ixesha lokuhlawula mboleko kwiinyanga kunye nezinga lenzala, ngokunjalo ucacise uhlobo yentlawulo - lonyaka okanye umahluko, kwaye ufumanise ukuba yeyiphi inxalenye iintlawulo kwi-mboleko isetyenziselwa ukuhlawula amatyala kunye kangakanani ukuhlawula inzala kwimali-mboleko, intsalela ityala layo ngeenyanga, ubungakanani egqithisileyo njengoko ngenyanga, yaye lonke ixesha mboleko, kwaye izinga lenzala sokwenene mboleko.
Xa ndlela enomahluko ye okuhlawula amatyala ukuze le mali-mboleko ye-mboleko yahlulwe izabelo ngokulinganayo. Ezi zabelo zenza isambuku iintlawulo zenyanga. Inxalenye lentsalela bamele umdla phezu besingekabhataleki kwi-mboleko. Ngoko inyanga iintlawulo ngenyanga Reduced Size.
Kule ndlela lokuhlawula imali-mboleko kukho ezithile.
EliyiNtloko phakathi kwabo kukuba-mboleko kunye okuhlawula amatyala kuthetha nzima ukuze afumane.
Bank ukubala zesixa mboleko ngokusekelwe enoba obolekayo uyakwazi ukuhlawula isavenge sokuqala. Oku kuthetha ukuba ukuze ufumane mboleko enjalo kufuneka ukuba babe nengeniso eliphezulu ngokwaneleyo. Kwezinye iimeko, loo nto ingakunceda guarantors ibheyile okanye intsebenziswano-kubaboleki umtsalane.
Enye drawback kukuba kwisiqingatha lokuqala lwekota zentlawulo obolekayo ingakumbi eziqatha. Ukuba sithetha mboleko elikhulu oku akubi ngumthwalo onzima ubolekayo. Kodwa elizayo kulo engxakini no kujika zibe nesidima. Nokunyuka kwamaxabiso kunye nokwehla iintlawulo umdla wenza ngaphantsi ngumthwalo.
Ngelo indlela annuity ye okuhlawula amatyala kwi-mboleko yahlulwe olulinganayo kuphela isixa ematyaleni, kodwa inenzala lonke ixesha mboleko. Ngoko, obolekayo ubhatala iminikelo alinganayo inkulu lonke ixesha intlawulo. Namhlanje, le ndlela yokuhlawula esetyenziswa ezininzi kwiibhanki zorhwebo. Chana ezingundoqo annuities kukuba isixa egqithisileyo kwi-mboleko iza kuba ngaphezu kwinkqubo enomahluko. Ngeentlawulo Ukongeza annuity kwinkqubo engaphaya icingela ukuba kwisiqingatha lokuqala lwekota mboleko uhlawula kakhulu inzala kwimali-mboleko. Kodwa isixa engundoqo ityala eli xesha wahlala phantse yasetyenzwa.
Ukuba ufuna ukuthatha ikhredithi ngenxa intywenka aze icwngciselele ukuba usihlawule ngaphambi kwexesha, uya kwamkela mboleko kunye nenkqubo yentlawulo annuity.
Kwezinye iimeko, ingakumbi xa kuziwa kwi-mboleko yexesha elide, kungcono ukukhetha kwibhanki inika mboleko kunye iintlawulo ngeenkalo.